Noocyada Android: wararka, wararka cusbooneysiinta, cayayaanka iyo inbadan | Androidsis
Dhamaanteen waan ognahay inay jiraan wax aan dhamaad lahayn Sistemyada Hawlgalka, in software taasi waxay naga caawinaysaa inaan ka dhigno kumbuyuutarka ama aaladda moobaylka inay u shaqeeyaan dhib la'aan Waxaan heli karnaa kuwa ugu caansan, sida Windows, laakiin sidoo kale waxaa jira kuwa kale oo mararka qaarkood aan la dareemin, sida ilaa hadda ku dhacday Android. Meelkan waxaad ka heli kartaa wax kasta oo la xiriira nidaamyada hawlgalka ee hadda jira, talo, macluumaad iyo wax kasta oo iyaga ku lug leh.
Sannad kasta, Android waxay sii deysaa nooc cusub oo leh astaamo iyo horumarinno badan oo cusub. Waxaan kuu sheegeynaa dhammaan wixii ku saabsan noocyada ugu dambeeyay ee Android, cusbooneysiinta iyo xanta ku saabsan sii deynta soo socota.
2018, waxay ahayd 10 sano tan iyo markii Android laga bilaabay suuqa. Nidaamka qalliinka ee Google wuxuu leeyahay horumar la yaab leh sannadihii la soo dhaafay. Soosaarayaal aad iyo aad u tiro badan ayaa adeegsanaya nidaamkan hawlgalka, oo ah kan ugu ballaaran ee laga isticmaalo adduunka, sannadihii la soo dhaafayna noocyo kala duwan ayaa horay loo sii daayay.
Nooc kasta oo cusub oo Android ah, astaamo cusub iyo horumarin weyn ayaa ku yimid nidaamka hawlgalka. Marka xigta waxaan ka hadli doonaa noocyadan, si aad u hesho fikrad cad oo ku saabsan isbeddelka ay ku soo jirtay sanadihii la soo dhaafay.
Qalabka Android 1.0
Noocii ugu horreeyay ee nidaamka qalliinka waxaa si rasmi ah loo bilaabay Sebtember 23, 2008. Taleefankii ugu horreeyay ee laga faa’iideysto wuxuu ahaa HTC Dream. Nidaamka qalliinka ma ahayn mid hagaagsan, laakiin waxaad arkaysay bidhaamaysa waxa ay ku noqon karto waqti ka dib.
Hawlaha qaarkood ee wali jira ayaa horeyba loo soo saaray, sida la-qabsiga Gmail, barnaamijyada Google sida Khariidadaha, Kalandarka, Xiriirada, YouTube ama mashiinka raadinta Google ee biraawsarka. Suuqa Android (nooca ugu horreeya ee Google Play Store) ayaa sidoo kale loo diyaariyey dadka isticmaala. In kasta oo bilaha ugu horreeya aadan iibsan karin barnaamijyada.
Intii lagu guda jiray 2009-kii dhowr nooc oo dheeri ah ayaa la sii daayay, Mooska Muuska 1.1, Koobka Cake 1.5 iyo Donut 1.6. Waa noocyo isdaba-joog ah oo dhexdhexaad ah oo shaqooyin cusub lagu soo kordhiyay, marka lagu daro hagaajinta qaar ka mid ah is-dhexgalka Android. Muhiimad weyn ayaa ahayd Android 1.6 Donut, oo calaamadeysay imaatinkeeda dadweynaha guud. HTC Magic wuxuu ahaa taleefanka muhiimka ah ee wajigaas.
Bishii Oktoobar 26, 2009, nuqulkii labaad ee nidaamka hawlgalka ayaa si rasmi ah u yimid. Warar badan ayaa la yimid, qaar badan oo ka mid ah ayaa weli jooga maanta. Tilmaanta Khariidadaha Google ayaa la soo saaray, biraawsarka si dhammaystiran ayaa loo cusboonaysiiyay, shaashadda guriga ayaa hadda la beddeli karaa.
Soo bandhigida hagida ee Khariidadaha Google waxay ahayd shay muhiim u ah Android. Maaddaama taleefannada casriga ahi ay sidoo kale noqdeen aalad ay isticmaaleyaashu isticmaali karaan si ay isugu jiheeyaan ama u qorsheeyaan jidadka. Shaqada muhiimka ah ee isticmaalayaasha. Mid ka mid ah taleefannadii isticmaalay noocyadan nidaamku wuxuu ahaa Galaxy S. Jiilkii ugu horreeyay ee dhammaadka hadda jira ee nooca Kuuriya.
Dhawr bilood ka dib, markay ahayd May 20, 2010, Froyo ayaa timid. Dareenkan, waxaad arki laheyd shaqada joogtada ah ee Google si loo hagaajiyo nidaamka qalliinka shaqooyinka cusub iyo isbeddelada qaabeynta. Noocani wuxuu ka mid ahaa kuwii gaadhay dhagaystayaal aad u tiro badan malaayiin macaamiil ahna xidhiidhkoodii ugu horreeyay ee ay la yeeshaan Android.
Isku-duwaha Dalvik, amarrada codka ama iswaafajinta Flash-ka la aqbali karo ayaa ah isbadalada ugu waaweyn ee noocan cusub ee nidaamka qalliinka innaga tagay. Noocyadan nidaamka ah, HTC Desire sidoo kale suuqa ayuu yimid. Taleefan ku raaxeystay caan ka mid ah macaamiisha.
Android 2.3 Sanjabiil
Dhamaadkii 2010 waxaan suuqa ku haysanay nooc cusub oo Android ah. Haddii kuwii hore ay horey u qaadeen tallaabooyin waaweyn oo ku saabsan horumarintooda suuqa, waxaa suuragal ah in noocaani uu ahaa ballaadhintooda dhammaadka ah. Waxay ahayd nooca ugu nadiifsan nidaamka, si walba. Labadaba xaga naqshadeynta iyo shaqooyinka.
Dhexdeeda, taageerada loogu talagalay dareemayaasha sida gyroscope ama barometerka ayaa lagu daray markii ugu horeysay. Intaas waxaa sii dheer, taleefanno badan waxay u ahayd noocii ugu dambeeyay ee ay heleen, maxaa yeelay Google wuxuu bilaabay inuu joojiyo bixinta taageerada. Waxa kale oo ay ahayd mid muhiim ah maxaa yeelay iyada oo ay la socdaan, ayaa Samsung Galaxy Note ugu horreeyay suuqa yimid.
Malabka Malabka ee Android 3.0
Maarso 2011, kaliya seddex bilood ka dib nuqulkii hore, waxaan haynaa nooc cusub oo Android ah oo diyaar ah. Kaliya maahan nooc kasta, maxaa yeelay waxay u timid suuqa dhexda dhexe ee kiniiniga. Sababtaas awgeed, waxaa la soo saaray nooc ka mid ah nidaamka qalliinka oo sidoo kale la jaan qaadi kara kiniinnada.
Xaqiiqdii, noocaani 3.0 wuxuu si gaar ah ula jaan qaadayaa kiniinnada. Waxay calaamadeysay soo gelitaanka Google ee qaybtan suuqa. Waxay ahayd nooc loogu talagalay in lagu isticmaalo shaashad ballaaran, oo leh shaqooyin cusub iyo aalado, iyo sidoo kale qaabab badan oo kala duwan. Waxay ahayd waqti lagu ballaadhiyay suuqa, kaas oo noocyo badan ay halis geliyeen moodello.
Dhowr bilood ka dib, dhammaadkii 2011, gaar ahaan Oktoobar 12, 2011, ayaa la bilaabay nooca 4.0 ee nidaamka hawlgalka. Nooca 'Android' ayaa loogu yeeray inuu mideeyo wax walba. Sababtoo ah waxaa loo diyaariyey labada taleefan iyo kiniiniyada. Waxay calaamad u ahayd bilowga wa cusub ee nidaamka hawlgalka.
Muuqaal ahaan waxay u ahayd isbeddel weyn Google. Astaamaha sida adeegsiga qalabka wax lagu dhejiyo ee qufulka, badhanka shaashadda, iyo awoodda lagu nadiifiyo ogeysiisyada ee tilmaamaha ayaa la soo saaray. Waxay sidoo kale calaamadeysay imaatinka Android Beam oo si rasmi ah suuqa u yimid. Motorola waxay ka mid ahayd noocyada ugu horreeya xilligan, moodello sida Moto RAZR.
Nooca xiga ee nidaamka qalliinka, oo la sii daayay Juun 2012, wuxuu ka mid ahaa kuwa ugu caansan illaa iyo hadda. Marka lagu daro ka mid noqoshada shirkadaha ugu badan ee suuqa ku leh adduunka oo dhan. Khibradda isticmaalehu si weyn ayey isu beddeshay, maaddaama nidaamku hadda uga jawaabey hab dheecaan badan leh. Isticmaalku aad buu uga fiicnaa.
Amarada codka iyo imaatinka Google Now waxay ahaayeen laba dhinac oo ahmiyad weyn u leh Android Jelly Bean. Ogeysiisyada waa la hagaajiyay oo Mashruuca Subagga ayaa sidoo kale yimid, kaas oo muhiimad weyn ku lahaa nidaamka. Sony Xperia Z wuxuu ahaa calanka markan. Waad ku mahadsan tahay kamaraddeeda 13 MP iyo biyo la'aan, mid ka mid ah taleefannada ugu horreeya ee Android ee arrintan la xiriira.
Android 4.4 KitKat waa nooc wali ay jecel yihiin dad badan oo isticmaala maanta. Waxay aasaaska u dhigtay waxa nidaamka qalliinka maanta yahay. Google waxay soo kordhisay dhowr teknoolojiyad muhiim ah, kuwaasoo ilaa maanta ku jira nidaamka qalliinka. Intaa waxaa dheer, waxay calaamadeysay imaatinka amarka Ok Google.
Naqshadayntu waxay ku sii socotey isbeddelkeedii, iyada oo xoogaa nadaafad iyo raaxo leh in la isticmaalo la adeegsado. Intaas waxaa sii dheer, horumarin ayaa la sameeyay si taleefoonada dhamaadka-hoose ay sifiican u shaqeeyaan markasta. Duubista shaashadda ayaa sidoo kale lagu soo bandhigay qalabka.
La bilaabay bishii Nofeembar 2014, waa mid ka mid ah noocyadan soo saaray xiisaha gaarka ah ee dadka isticmaala Android. Maaha wax lala yaabo, maxaa yeelay waxay ka mid tahay kuwa innagu reebay isbadalo waaweyn. Naqshadeynta Maaddadu waxay ka samaysay albaabkeeda noocaan ah nidaamka qalliinka. Waxay ahayd isbeddelkii ugu horreeyay ee weynaa ee uu naga tagay.
Waxay sidoo kale loola jeeday imaatinka processor-yada cusub ee 64-bit, maaddaama Android ay hadda taageerto. Taageerada Multiscreen ayaa sidoo kale la soo bandhigay, Smartlock wuxuu gaadhay nidaamka hawlgalka ugu dambayntiina, Mashruuca Volta ayaa yimid.
Bishii Oktoobar 2015, nooca lixaad ee Android horey ayuu suuqa ugu jiray. Nooc isdaba-joog ah, oo ay ku caddahay in Google horeyba u lahaa fikrado cad oo cad oo ku saabsan waxa ay doonayaan inay ku guuleystaan ​​nidaamka hawlgalka. Laakiin, sii wadida isbeddelka soo bandhigidda horumarinno muhiim ah oo ku jira.
Qeybtan, waxaa la go'aamiyay in la hagaajiyo wixii horay uga jiray Android. Ma jirin isbedello waaweyn, laakiin waxaa jiray horumarro badan, oo loogu talagalay in lagu bixiyo waxqabad wanaagsan. Maareynta batteriga waa la hagaajiyay, rukhsadaha barnaamijka hadda waa la maamuli karaa, oo keydinta la qabsiga ayaa halkaan taal. Waxay sidoo kale dib ugu soo celisay kaarka SD taleefannada Android. Google Now sidoo kale waxay soo bandhigtay On Tap, oo si uun u aasaasay aasaaska waxa uu yahay Kaaliyaha Google maanta.
Nooc aad u dhow, oo bilihii la soo dhaafay ahaa kan adduunka ugu isticmaalka badan. Imaatinkeeda waxaa hadheeyay daahfurkii Google Pixel. Raadinta codka ayaa ahayd mid ka mid ah furayaasha noocaan ah Android. Sidoo kale dejinta luqadda degdega ah. In kasta oo hawsha ugu badan ee la filayay ay ahayd daaqad badan. Wax durba la yimid Nougat.
Sida noocii hore, Google waxaa ka go'an inay sii wado hagaajinta dhinacyo badan oo ku jira nidaamka qalliinka. Horumarkeedu xoogaa ayuu gaabis ku ahaa suuqa, laakiin waa la ogaa inuu taaj u noqdo nooc ka tagay horumarin iyo khibrad adeegsade wanaagsan.
Waxaa la sii daayay Ogosto 2017, noocaan ah Android waxaa tixraaca dad badan sida ugu caqli badan weli. Kaaliyaha Google waxaa lagu xoojiyay barnaamijka 'Android', isagoo si cad u sheegaya inay horay u ahayd cunsur muhiim u ah istiraatiijiyadda shirkadda Mareykanka. Inta soo hartay, horumarin yar ayaa ku soo socota nidaamka.
Hagaajinta dhammaystirka otomaatiga, hordhaca Habka Sawirka-Sawirka ah. Marka lagu daro barnaamijyada degdegga ah, oo aad iskudaydo adigoon rakibin, wax sidoo kale macquul ku ah ciyaaraha. Nooc la yimid oo ay la socdaan jiilka labaad ee Google Pixel. Pixel 2 XL shaki la'aan waa mid ka mid ah moodooyinka ugu dhameystiran uguna tayada sareeya ee lagu sii daayo Android.
Nooca ugu dambeeyay ee nidaamka qalliinka illaa hadda, oo la sii daayay Ogosto 2018. Nooc sirdoonka macmalka ahi halkan u joogo inuu ku sii sugnaado Android. Waxaa loogu talagalay in isticmaaleyaashu u adeegsadaan nidaamka hawlgalka qaab cusub. Wax ka muuqda tilmaamaha.
Hagaajinta ayaa sidoo kale lagu sameeyay maaraynta batteriga, dhalaalka la qabsiga. Intaa waxaa sii dheer, waxaan aragnaa sida qaan u u noqday wax caan ku ah taleefannada. Wax ku qasbaya nidaamka iyo barnaamijyadu inay la jaanqaadaan nashqaddan cusub ee ku jirta taleefannada casriga ah ee Android.
Sida loogu rakibo Android VirtualBox oo loogu raaxeeyo Android kombuyuutar
by Ignacio Sala samee Bilaha 3 .
Habka ugu wanaagsan ee loogu raaxaysan karo Android kombiyuutar ma aha in la isticmaalo emulators sida BlueStacks, laakiin ...
Sii wad akhriska>
Sida loo rakibo barnaamijka 'beta 12 beta' talaabo talaabo ah
by DaniPlay samee Bilaha 7 .
Beta-kii ugu horreeyay ee Android 12 horeyba wuxuu ula jiraa dhammaantood annaga oo leh warar badan oo casiir leh, oo ay ku jiraan naqshadeynta ...
Android 12 waxay soo bandhigeysaa naqshad cusub iyo shaqeyn leh isbeddelo aan caadi aheyn
Inta lagu jiro Google I / O 2021, Google waxay soo bandhigtay nooca xiga ee nidaamka hawlgalka mobilada, Android 12. At the…
Sony Xperia 1 iyo Xperia 5 waxay bilaabayaan inay helaan xasilloonida Android 11
by DaniPlay samee Bilaha 11 .
Sony waxay xaqiijisay in laba ka mid ah terminaalkeeda ay helayaan nooca xasiloon ee Android 11. Waa Sony ...
Noocyada cusub ee Android waxay sii wadaan hagaajinta heerka korsashada
by Ignacio Sala samee Bilaha 12 .
Android had iyo jeer waxaa lagu gartaa kala qaybsanaan, sababtoo ah dayaca soo saarayaasha badankood markay ...
Haddii taleefankaaga ay maamusho Android 7.1 waa inaad bedeshaa 2021 haa ama haa
by Ignacio Sala samee Sannadka 1 .
Mid ka mid ah dhibaatooyinka ay la kulmaan dadka isticmaala Android ayaa ah kala qaybsanaan, waa dhibaato yar ...
Android 11 wuxuu bilaabmayaa inuu yimaado TV-ga Android
Bilowgii Sebtembar, Google wuxuu sii daayay nooca ugu dambeeya ee Android 11, oo ah nooc si tartiib tartiib ah u imanaya ...
Android 11 waa halkaan iyo warkeeda ugu weyn ee 11
by Manuel Ramirez samee Sannadka 1 .
Android 11 waa halkaan kadib bilahaas horumarka ee leh horudhaca hormarinta iyo maxaan tagnay ...
Liiska rasmiga ah ee taleefannada Xiaomi ee cusbooneysiin doona Android 11
by DaniPlay samee Sannadka 1 .
Xiaomi waxay la wadaagtay golaheeda rasmiga ah taleefannada ku cusbooneysiin doona Android 11 laga bilaabo ...
Android 11 ma tusi doono sawirka albumka ee aan ku ciyaareyno shaashadda qufulka
Nidaam kasta oo ka hawlgala mobilada wuxuu leeyahay xulashooyin habayn kala duwan leh, iyadoo Android ay tahay mida ku guuleysata aqlabiyadda. Sida isticmaale Android ah ...
Google ayaa ka hortagi doonta taleefannada leh 2GB RAM inay si buuxda u isticmaalaan Android 11
Google wuxuu bilaabay inuu sii daayo beta-ka Android 11 iyo tilmaamaha qaabeynta qalabka ayaa muujinaya ...
Qeybaha ugu muhiimsan
Motorola waxay ku tijaabin doontaa Android Oreo Moto G4 Plus
10 telefoonada BQ ayaa cusbooneysiin doona Android 9.0 Pie
Liiska taleefannada ku habboon Android 9 Pie
Lenovo Tab 4 ma lahan Android 8.1 Oreo ilaa dhamaadka sanadka
Ulefone S7 Go wuxuu soo bandhigi doonaa Android Go (Oreo Edition)
Android P ma imaan doono Nexus
Ma waxaad raadineysaa taleefan wata Android One? Kuwani waa kuwa lagu soo bandhigay MWC 2018
Motorola waxay cusbooneysiineysaa Moto Z, Z2 Play, G Plus 4 iyo in ka badan oo ah Android Oreo
Cusboonaysiinta 'Android Oreo' waxay sababtaa guuldarrooyinka 'Xiaomi Mi A1'
Ma qiyaasi kartaa Android la’aanta Google? Eelo ayaa run ka dhigi karta
OnePlus 5 si kumeelgaar ah uma heli doono cusbooneysiinta Android Oreo
Waxyaabaha Android 8.1. Oreo wax yar baa yaqaan adeegsadayaasha
Google wuxuu xaqiijinayaa saacadaha casriga ah ee cusbooneysiin doona Android Oreo
Liiska buuxa ee telefoonada Samsung oo cusbooneysiin doona Android Oreo
Motorola wuxuu bilaabaa inuu soo daayo Android Oreo inta udhaxeysa Moto Z Play iyo Z2 Play
Android Wear 2.6: Warka ku soo kordha cusbooneysiinta cusub
Android 8.1 Oreo Waa rasmi! | Waxaan ku tuseynaa dhammaan Warkiisa
Android 7.1.1 Nougat wuxuu imanayaa Samsung J5 (2016)
Furayaasha tijaabada lambarka dhismaha ka dib markaad ku dhejisid Nougat Huawei P9 Lite? Halkan xalka
Ku qasbi cusbooneysiinta Android 7.0 Huawei P9 Lite